ဗာနူအာတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိတည်ရှိသောပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည်အား "ဗာနူအာ၏သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးမီးတောင်ကျွန်းစုတွင်တည်ရှိသော၎င်း၏မြေဧရိယာ 4,706 ၏ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေနှင့်အတူ 12,189 စတုရန်းမိုင် (287,000 ကီလိုမီတာ) စုစုပေါငျး။ ဗာနူအာ (340 ကီလိုမီတာ) (540 ကီလိုမီတာ) အရှေ့မြောက်ဘက်နယူး, 1,090 မိုင်, အနောက်ဖီဂျီ၏မြောက်ပိုင်းသြစတြေးလျ၏အရှေ့နယူးဂီနီနှင့် 1,750 မိုင်အရှေ့ဘက်ဆော်လမွန်ကျွန်းစု၏အရှေ့တောင်ဘက်တည်ရှိသည်။
ဗာနူအာအင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေအရလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်ဗာနူအာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကမည်သည့် Pre-လွတ်လပ်ရေးဗြိတိန်ဥပဒေများရုတ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းပေးပါသည်။
•အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်း, တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်နှင့် Trust မှကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ။
နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (IC) က IC က၎င်း၏ liabilities တွေ့ဆုံရန်နိုင်ကြောင်းရေးအတွက်ဒါရိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာဝန်ရှိရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နာကဤဥပဒေများကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဗာနူအာတရားရုံးချုပ်မဆိုပဋိပက္ခများကို adjudicates ။ သင်တစ်ဦးရရှိရန်လိုလျှင် ဗာနူအာ Forex လိုင်စင် သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, တရားကိုလျှောက်ထားရန်တဦးတည်းလိုအပ်ပါတယ် ဘဏ္ဍာရေးလိုင်စင်.
• ကော်ပိုရိတ်အခွန်အဘယ်သူမျှမ: ဗာနူအာက၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းအပေါ်အခွန်စည်းကြပ်မထားဘူး။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ, သို့မဟုတ်၎င်း၏ဒါရိုက်တာများထုတ်ဖော်ရန်မလိုအပ်ပါ။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအနည်းဆုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: ဗာနူအာက၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းကသူတို့ရှယ်ယာရှင်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
• အစိုးရတည်ငြိမ်ရေး: ဗာနူအာကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုမရှိသမိုင်းနှင့်အတူအလွန်တည်ငြိမ်အစိုးရရှိပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗာနူအာ၏တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
• အနိမ့်နိမ့်ရှယ်ယာ Capital ကို Authorized: ဗာနူအာအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း၏နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကော်ပိုရိတ်နာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တင်သွင်းနေကြသည်။
ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိပ်စာရှိရမည်။ ဤသည်မှာလိပ်စာဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည် တောင်းဆိုမှုများ နှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များသည်။
ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမအများဆုံးအရေအတွက်ကရှိပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များဗာနူအာ၏နေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုပါ။
ဗာနူအာအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း၏နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်း၏သက်တမ်းတိုးများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာနှစ်စဉ်ကြေး $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ဗာနူအာကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်ပြန် file သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများတင်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။
ဗာနူအာကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ: အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်, တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့လိုအပ်ပါသည်တစ်ဦးအလွန်နိမ့်နိမ့်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှယ်ယာမြို့တော်, အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်၏ ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်ပိုင်ရှင်တွေရှယ်ယာရှင်, ဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာ၏ဝိသေသလက္ခဏာထုတ်ဖော်ရန်မလိုပါနှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များမှအပိုဆောင်း privacy ကိုပေးဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။